Features - eeg jidka oo waqti goob dhexe Horukon
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Features - eeg jidka oo waqti goob dhexe Horukon
In qabashada Horukon, waxa uu ahaa in ay awoodaan in kubad ka soo dhigay iyadoo Horukon. iyaga ka mid ah, rakibo sare, meel dhexe, waa in-set hoose iyo saddex nooc oo ay joogaan. In, in set dhexe, waxaan jeclaan lahaa in waxa ka socda si loo eego waxa ay tahay in ay dhacaan. set Dhexe ee
Horukon ayaa ugu adag si aad u aragto iyada oo loo marayo in 3 nooc oo goobaha.
Sida sababta, waxyaabaha aad sida sababta oo ah dhaqdhaqaaq la mid ah set sare waqtiga loo arki karaa. Tusaale ahaan, in ka-set sare, laakiin waxa ay ahayd in ay jirto dareen ah in kubada waxaa la nuugo galay bilowgii, sidaas darteed waa wax la mid ah ayaa sidoo kale dhexe ee markii goob dhacdaa isla. sidoo kale
, iyo ifafaale in ay adag tahay in la yareeyo kubada ee saxaarad sare, ayaa sidoo kale la sidoo kale ka dhacaan arrin ka go'an dhexe u egtahay jidka marayo. Xaqiiqada ah in uu yahay, farqiga u dhexeeya meesha sare iyo goobta dhexe, waxaad u timid inaad xaqiiqda ah in aan aad u weyn.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan jeclaan sidoo kale waxaa jira meel oo kala duwan oo ay goob sare iyo goob dhexe.
, Waxa ay u muuqataa xaqiiqada ah in tirada givin Ghanna waa kala duwan. In the case of goob sare, kooxda, kaas oo la doortay ee go'aan koox, laakiin waxa uu ahaa hit weyn gudahood dhacdaa mid ka mid kale ka dib, in ay dhacdo goob dhexe, sidoo kale kooxda kula guuleystay, afar shantii kooxaha gudahood, oo ku saabsan mid ka mid kaliya ee aad wax badan tahay dhici in Ghanna aan la xiran.
in this aragtida, ka mid ah kuwa inay qiraan qabashada Horukon ah, sababtoo ah waxaa sidoo kale kuwa opinion way ka duwan tahay, ma ogi waxa cad. Tan iyo markii ay xaqiiq tahay in dadka qaar leeyihiin noocaas ah opinion, isku day in aad tixraaca sida mid ka mid ah opinion.
ifafaale u noqon doonaa feature ee laga yaabo inay dhacaan goob dhexe.
waxaas oo kale waa, garaacida dooneysa miiska in dhacdaa si joogto ah, xataa in la ballamay dhexe ayaa la sheegay in ay suurtagal tahay in ay soo jiidan hit weyn ka hor.
Si kastaba ha ahaatee, waayo, qabashada isticmaalaya Horukon ah, waxay leeyihiin fikrado kala duwan ka mid ah kuwa this xaqiijin Sidoo kale waa run waxaa jira inta badan sidoo kale ay dhacdo in. Tan iyo markii ay sidoo kale waa yar waxa ku qoran oo ku saabsan set dhexe marka in
net, iwm, asal ahaan ereygu u jeedaa goob sare iyo wax ugub ah oo la mid ah, waxay noqon lahayd in ay xaqiiqada ah in fikrad fiican in aad eegto tirada ama la mid ah Ghanna ah waxaan qabaa.